Qaabka Dib u Noqoshada Shumaca Xaraami Iskutallaabta | vfxAlert official blog
Ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah waa mid fudud: qaabka dib u noqoshada shumaca Xaraami Cross
Waxaan sii wadaynaa maqaallo taxane ah oo ku saabsan sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah iyada oo aan daraasad dheer lagu samayn falanqaynta farsamada iyo laambadda. Si tan loo sameeyo, waxaan eegeynaa jaantuska qiimaha ee qaababka laambadda laambadda ee tilmaamaya bilowga dhow ee isbeddelka isbeddelka. Mid ka mid ah kuwa ugu xoogan waa nooca «Harami», oo nuqulkiisa oo leh "Doji" shumaca waxaa loogu yeeraa "Xaraam Cross".
Haddii qaab Harami caadi ah loola jeedo calaamadaha xoogga dhexdhexaadka ah, markaa muuqaalka iskutallaabtu had iyo jeer waxay u baahan tahay fiiro gaar ah.
Qaabka ayaa si siman ugu xoogan salka iyo xagga sare ee isbeddelka, oo magaciisa dhexe waxaa loo tarjumay "cabsi". Way adag tahay in la sheego halka urur noocan oo kale ahi ka yimid, laakiin wakhtiyo dhaadheer oo ka socda H4 iyo wixii ka sarreeya, waa suurtagal in la kasbado illaa boqol dhibic ganacsi kasta ama la furo fursado faa'iido badan oo isku xiga. Istaraatijiyad ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh waxay umuuqataa sida soo socota:
Xirfadlayaashu way soo gali karaan suuqa isla markaaba markay xiraan shumaca ka dambeeya Doji, iyadoon loo eegin jihada ay u socoto. Bilowga ah waxay u baahan yihiin inay sugaan illaa ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah loo sameeyo si buuxda.
Si loo fahmo sida dadka suuqa uga dhex shaqeynaya kiiskeena, aan eegno jaantuska maalinlaha ah ee sida xaragada Harami u muuqato.
Xilligan la joogo, ka sarraynta xoogagga dhinaca dibiyada, sida ku cad dhowr shumacyo dhaadheer oo dhaadheer;
Tilmaamaha ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah wuxuu leeyahay muuqaalka dogobku wuxuu ka dhigan yahay joogsasho lama filaan ah oo dhaqdhaqaaq ah ama, sida ay yiraahdaan, "suuqa ayaa ku turunturooday heerka". Si fudud haddii loo dhigo, halgan dheer ka dib, maalmuhu waxay ku xirmayaan isla qiimo ama ka hooseeyaan tii hore. Awoodda dibiyada ayaa ku dhow daal, mana sii riixi karaan suuqa sare;
Isla mar ahaantaana, bearsadu wali ma haystaan awood ku filan oo ay ku bilaabaan hoos u dhac dheer, maadaama lagu qasbay inay iibsadaan mugga suuqa ee hadda ku jira qiimo aad u sarreeya. Laakiin mararka qaar ka dib u wareejinta ciyaartoyda waaweyn ee dhinaca iibka, qiimaha ayaa bilaabi doona inuu hoos u dhaco, ugu yaraan sixitaan qoto dheer ayaa la filan karaa.
Marka laga hadlayo xaaladda qallafsan ee Xarami, xaaladdu waxay u soo ifbaxday si ka soo horjeed ah: suuqa wuxuu galay gobol la iibsaday oo hadda eraygu waa iibsade. Sidaad u aragto, wax waliba waxay ku dhacaan si adag oo waafaqsan falanqaynta farsamada: wejiyada qaybinta (iibsashada firfircoon ama iibinta) iyo uruurinta (muddada xoojinta ee ay tilmaamtay Doge) ayaa xilliyo midba midka kale beddela.
Tusaalooyinka iyo talooyinka
Harami waa falanqeyn caadi ah oo ku saabsan shumacyada, isticmaalkeedana ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah kama duwana kuwa kale. Ugu yaraan laba xaqiijin ayaa looga baahan yahay aaladaha kale ee falanqaynta farsamada, kuwaas oo ay ka mid tahay inuu jiro tilmaame isbeddel iyo ugu yaraan hal oscillator. Aynu ku dabaqno 'Parabolic SAR' iyo Stochastic Oscillator sawirka hore:
Markaad xulaneyso istiraatiijiyad, xusuusnow in "inbadan markasta aysan fiicneyn." Shumaca Xarami laftiisu wuxuu ka tarjumayaa qodobo badan oo saameeya qiimaha, umana baahna in lagu raro tilmaamo aan loo baahnayn.
Xitaa haddii shaxanka si buuxda loo sameeyay haddii xilliyadii hore ee 10-15 muddooyinka hore Doji inta badan la kulmo, waxaa fiican in laga boodo calaamaddaas oo kale. Tani waa calaamad la hubo oo ku saabsan suuqa mala-awaalka ah ama aan la hubin, marka ciyaartoy waaweyn ay sugayaan, xilliyo xilliyeed ku soo noqoshada dhiiranaanta suuqa xaaladdooda asalka ah;
Sida dhammaan shumacyada Jabbaan, Harami marar dhif ah ayaa laga helaa barxadda ganacsiga laba-cirifoodka ah qaab dhammaystiran, waana muhiim inaad horumariso habka aad adigu ugu shaqeysid moodooyinka aan caadiga ahayn. Sidaa awgeed waqti-yar, shamaca ugu horreeya ee heerka dhow inta badan wuxuu la jaanqaadaa heerka dhow ee Doji xiga.
Haddii farqi u dhexeeyo shumaca ugu horreeya iyo Doji, kani waa sawirka "Doji Star", oo aan ka xoog badnayn, maadaama ay u badan tahay in suuqa uu tagi doono xidhitaanka taallo.
Habka Xarami wuxuu dhab ahaan noqon karaa bilowga "Saddexda Caddaan Cad / Saddex Shumaca D dhacaya", oo u baahan istiraatiijiyad ka duwan. Haddii aadan hubin calaamadaha ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah, waxaa fiican inaad sugto shumaca saddexaad - haddii uu leeyahay jir dheer oo loo jiheeyo dhinaca ka soo horjeedka kii ugu horreeyay, tani waxay noqon doontaa calaamad wanaagsan oo isbeddel isbeddel ah, oo aan ahayn sixitaanka ama hakad ku yimaada dhaqdhaqaaqa.
Hubi jadwalka waqtiga sare ee isku-darka shumaca kale. Waxaa macquul ah in Xarami saacadda u dhexeysa ay qayb ka noqon karto moodel caalami ah, sida Madaxa Garbaha afar saac ama shaxda maalinlaha ah. Xaaladdan oo kale, way fiicantahay in laga shaqeeyo qaab dheer, waxay noqon doontaa mid aan khatar badnayn oo ka faa'iido badan;
Calaamadaha astaamaha daciifintu waxay noqon doonaan hoos u dhac fiiqan oo ku saabsan mugga ganacsiga ee Doji, bixitaanka hooskeeda ee ka baxsan hooska shumaca koowaad.
Markay soo muuqato "Cross Harami", marwalba xusuusnow in ay ka liidato xoog ahaan tirooyinka sida " Bullish / Bearish engulfing ". Falanqeeyayaasha Japan waxay u tixgeliyaan inay calaamad u tahay kala duwanaansho la'aanta suuqa sababtoo ah Doji wuxuu tilmaamayaa isku dheelitirka awoodda u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha, taas oo goor dhow ama goor dambe ay ku dhammaan doonto guusha mid ka mid ah dhinacyada. Markaad la shaqeyneyso calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah , waa inaad marwalba u hoggaansantaa sharciga aasaasiga ah "raadi ugu yaraan hal qodob oo xaqiijin dheeraad ah", sida ku cad shaxanka kore.
Eeg heerarka taageerada / iska caabinta, heerarka xad dhaafka / iibka badan, ama Isgoysyada Celceliska Dhaqdhaqaaqa. Gelitaanka suuqa kaliya qaabka shumaca waa mid aad khatar u ah.